Komishan Diid Waa Daacad Doon ( Abdi-Shotaly)!
(Hadhwanaagnews) Friday, January 11, 2019 15:32:58
Hadaba waxan u soo qaatay arimaha aan idiin soo guud maray, nin la yidhaaho magaciisa Maxamed Gacayte, oo ah ragga war-bahainta wax ku qora
Horaa loo yidhi Somalidu been way sheegtaa, ee been ma maah-maahdo, waxan maanta soo qadanayaa, murti ka mid ah sarebee-baha ay wax kula baxdo, in badana la arkay, saakana ay taagan tahay iyada oo kaanuhu-maanuhu ah, waxana ay tahay ama ay yidhaahaan " Ninka hadima taliyaa isagaa u halis ah" Waxa kale oo ay tidhaahaa " Booraan hadimo ha qodin, hadaad qodana ha dheerayn, ku dhici doon-taana mooyee" isku soo duub oo labadda odhaa-hoodba waxay inoo sharaxa-yaan, qofka balaayo
taliska ahi, in uu aakhirka isagu uu qoobka la galo, kuna dhaco dabinkii uu u xidhaayey ruux kale.
Hadaba waxan u soo qaatay arimaha aan idiin soo guud maray, nin la yidhaaho magaciisa Maxamed Gacayte, oo ah ragga war-bahainta wax ku qora, horta marka hore waan ku salaamayaaee iga gudoon, marka xiga waxan rabaa in in yar kaala doodo, maqaalka aad qortay ee aad ugu magac dartay " Komishan diid waa doorasho diid", kaas oo aan si cad u arko in aad tahay mid-ka-mid ah, kuwa carqala-daynaaya jiri-taanka Dal-keena iyo dad-keena, misna ku af-gobaad-sanaaya Somaliland baa wax la yeelayaa. waxa-se ay murti somaliyeed ahayd, nin meeli u cadahay, meeli ka madaw, ee waxad thay doc iskaga baydh, ka fog daacadda, xaqiiqdda, sinaanta, wadda jirka, meel u wadda jeedka ummadda reer somaliland, ee in aad iska cadayato halka ku belelaysa baa kuu wanaagsan.
Marka dab la helo iyo weelkii ku haboonaa waxa la karinaayo, baa dheriga loo dhar-dhaaraa, inta-se aan la hayn ma hawadda baad wax ku karinaysaa? Tusaale kale aan ku siiyo'e, laba nin oo Somaliyeed oo is waraysa-naaya, baa mid ku yidhi kii kale, oo aan weliggii gursan gabadh, imisa caruur ah baad leedahay? Kii suaasha la waydiiyey baa ugu jawaabay, inta aanad i su'aalin caruur ma leedahay, waxa wacnayd in aad i weydiiso, horta hooyaddii dhali lahayd ma haysa? ama maba guurstay abidkaa? Xaase ma leedahay, Wayao caruurtu iska iman mayso adoon hooyadood haynin. Hadal iyo murti-diisu waxay tahay, oo aan uga socdaa, kuuna haboonayd, doorashadda in la helo dadkii si daacad ah u qaban lahaa baa wax kaste ka kow ah, haddii aan kuwii-ba la haynin, Ma iyadda baa is qabanaysa? Ku darso oo Mr Gacaytaw, Saddex madax-weyne ku xigeen,baa iskood isu xil saaray, in ay ka midho dhaliyaan, oo xal ka gaadhaan siddii ay doorasho u qabsoomi lahayd. Bal qabso oo muwaadin Maxaa duufaanka ku kiciyey?, Ee lagu kala kacay? Sheekadu maaha Waddani baa diiday, ee way ka sal weyn tahay intaas. Maamulka askarta iyo qaybi-hiisa kala duwan baa hor taagan, oo diidan in ay hir-gasho doorsho xor iyo xalaal ahi. Inta taas la helaayo-na, waa habeenkii xalay tegay doorsho lagu heshiiyaaye runta is taabsii, ha ka warwa-reegine.
Waad maqlaysay ama aad dhegay-satay, gudiddii Ucid uga wakiilka ahayd wadda hadalka sadexdda Xusbi, ee loo xil saaray arima-haaas in ay meel ku tiiriyaan, kuna soo dabaalaan siddii wadda jir loogu niyad samaan lahaa. Yaa fara geliyey ee dad ku soo darsaday?, kuwa dabadda ka riixayaa, keensaday qaar aan meesha ku jirin, oo aan la isku ogayn, kana dul booday madax-weye ku xigeenaddii waan-waanta waday waa ayo? Doorashadda aad ka hadlayso, ma waxada ka doonaysaa aan iska wato'e wax walba iga yeel? Asakriga iyo mamaulka hoos yimaadaa ( Waa guurtidda iyo Baarlamaanka ku sheega'e), iyaka baa si badheedh ah u diidan, rabina in ay dhacdo, iyaka baa ah madax muuqadda iyo mijo qarsoon, wadda dabaal-joogtayn aan cidna ka dednayn. Adna waxan ku odhan lahaa, oo aan ku soo xidhay qoraalkan, kala daa isma raacdee " Aynu wax qalano iyo aynu midiyaha qarsano". Komishan-kani mid kaa qarsoon maaha, ee khaladka baad ku gargaaraysaa, taasina tu laga yeeli karo ha fadhiyin, adiga iyo inta ku daba ordaysa-ba maaha dar wadda danta ummadda. waxan ku soo xidhay, oo aan kugula talin lahaa, waa haddii aad daacad u dooday-side, ka daa ummadda dhibaatadda aad u hadoodi-laysid, xaqa sheeg, oo gefka farta ku fiiq, ama iska badheedh aakhiro danteeda'e. Ninkii u han weyni, hogaanka dalkaw, Han-kaagu ha dhaafo reer hebel, oo ku dhaqan, kana dhex ahaw, oo cadaaladda u hiili, intaad soo dhaafta xaafadda.
N.B Ninkii U Han Weyn, Hogaanka Dalkaw, Ha Dhaafo Reer Hebel.